Ụlọ ọrụ - WELLWARES (SHIJIAZHUANG) LTD
Wellwares bụ onye na-eweta ihe ngwọta, ọ bụghị naanị onye na-ebubata ya.
1. Ụlọ ọrụ mmepụta -- Environmental-Protection ruru eru site NEPA
A na-emelite ụlọ ọrụ Wellwares site na iji akụrụngwa nchebe gburugburu ebe obibi kachasị ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ a bụ NEPA (National Environmental Protection Agency) tozuru oke.Ọzọkwa, anyị gburugburu ebe obibi akụrụngwa ezute kpam kpam mbaihe nchekwa gburugburu ebe obibi chọrọ yana jikọọ na netwọk obodo,nke na-eme ka mmepụta ahụ dịkwuo mma.
2. Na Wellwares, a na-emepụta ngwaahịa anyị niile site na ntụkwasị obina ụlọ ọrụ ndị ruru eru gburugburu ebe obibi nke ụlọ ọrụ.
Anyị bụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebupụ mbupụ na mpaghara ugwu China.Kemgbe 1999,Wellwares nwere ụlọ ọrụ 3 na-eketa òkè, na-emepụta ụrọ/jiri aka,stoneware/agba siri ike, poselin/decal, poselin/embossed, iko, efere, efere.
N'ime ngwaahịa ndị a, a na-enye ihe karịrị 50% na Wellwares.
E wezụga, Wellwares nwekwara ọzọ 5 rụkọ ọrụ ụlọ mmepụta ihe naA na-enye 20% nke mmepụta ha n'usoro iwu wellwares.Ọzọkwa, anyị na-ahazi 2 QCmkpara na onye ọ bụla factory iji jide n'aka na ngwaahịa ruru eru tupu mbupu, otú anyị nwerenjikwa dị mma nke ikike mmepụta ụlọ mmepụta ihe na ịdị mma.
3. ngwugwu & Decal Factory
Ụlọ ọrụ ngwugwu: Dongguan Jiade Package Technology Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ: Germany KBA & Roland 5 Agba Printer
Japan Mitsubishi 5 Agba ngwa nbipute
4. World Famous Compliance & Audits
Nyocha ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa: Walmart, Target, BSCI, Sedex, Costco, WCA(Ntụle ọnọdụ ọnọdụ ọrụ),Woolworths, Disney.
Ụlọ ọrụ anyị enwetala site na nyocha ikike ikike: Walmart, Target,BSCI, Sedex, Costco, WCA (Ntụle ọnọdụ ebe ọrụ), Woolworths,Disney wdg Ya mere, a na-ekwe nkwa ịdị mma na ụbọchị nnyefe.
5. Ụlọ ihe ngosi mkpokọta sara mbara
Na Septemba 2015, Wellwares hibere ụlọ ngosi ọhụrụ nwere mpaghara 200 square mita.
Ụlọ ihe ngosi anyị bụ ebe a na-achịkọta ngwa nri seramiiki a na-eji kwa ụbọchị,nnukwu nhọrọ gụnyere: agba aka / embossed / spray / decal / pad printing / glazed na na.
Anyị na-akwadokwa akwụkwọ akụkọ.